Sigcina inani elikhulu le-din931 hex bolt. Ezi zi-hex-head bolts zineentsontelo ezincinci kwaye zadityaniswa kubude bonke ngokwe-DIN 931 kunye ne-DIN 933 zizinki ezikhuselweyo zokhuseleko lokhuselo.
I-DIN6921 Flange Bolt inomsebenzi wokumisa ukujikeleza, okwafumaneka kumphezulu wenxalenye yokudibanisa efuna indawo ethe tyaba okanye egudileyo. Ngapha koko, iDIN6921 Flange Bolt yethu ilungile kwisiseko sekhonkrithi esimilisiweyo, kwaye isetyenziselwa ukulungisa iziseko zoomatshini nezixhobo. Ngenxa yobungakanani obufanelekileyo kunye noyilo olubumbeneyo, inokubekwa kuyo yonke indawo ukuze ikwazi ukunceda ukukhulula indawo yeendawo ezinomda. Inkangeleko emxinwa ibukeka intle kwaye intle.
Ishushu-thambisa i-hexagonal bolt eshushu
Igama lemveliso Hot dip Galvanizing hex bolt ubungakanani M2-M160 Material Carbon iron, Stainless Stain, Njengoko iimfuno zakho. IBakala lesiBanga: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Ect Surface Ukugqitywa kweThafa, kudlule, (ROHS) Zn-kucatyisiwe, kubekwe kwi-Ni, kufakwe iimfuno zakho. Umgangatho oqhelekileyo we-DIN GB ISO JIS BS ANSI Certification ISO9001, SGS, I-OEM engekho mgangathweni iyafumaneka ukuba unika umzobo okanye isampuli. Ukupakisha kumgangatho oqhelekileyo wokuthumela ngaphandle okanye ngokwemfuno yabathengi ...
Ukuntywila kwidiphu yokulwa nobushushu
Igama Umakhi weFirmener ekhethekileyo i-bolt anti-theft bolt kunye ne-nati Ngokutsho kwemfuno yomthengi. Izixhobo zensimbi engaginyiswanga, ikhabhon yentsimbi i-Finish Plain, i-zinc ibekwe emgangathweni, Umgangatho omnyama ophezulu weAnicororrosive Performance salt Spray Uvavanyo lokufikelela kwi-1000-2000 yeeYure zoSetyenziso ngoMatshi, iMveliso yeMichiza, indalo, isiQinisekiso soKwakha I-ISO9001 2008 Ukupakisha iibhokisi kunye neepasile okanye ngokweemfuno zomthengi. Ixesha lokuhanjiswa liqhelekileyo ngo-15 ...
Sigcina inani elikhulu le-din931 hex bolt. Ezi zi-hex-head bolts zineentsontelo ezincinci kwaye zadityaniswa kubude bonke ngokwe-DIN 931 kunye ne-DIN 933 zizinki ezikhuselweyo zokhuseleko lokhuselo. uphawu: JiuHe M16 ubungakanani din931 hex bolt, M20 ububanzi din931 bolt, M24 din931 standard hex bolt, m30 din 931 hex bolt, zonke zizitokhwe. Isetyenziswe kakuhle kwindawo nganye yecandelo jikelele.
I-U-bolt yibholithi ebumba unobumba u-U kunye nentambo yesikali kwiziphelo zombini. Icarbon iron U bolt ngokucacileyo ichaza ukuba impahla ye-bolt ye-U yintsimbi yekhabhoni.
Ibhalbhu yensimbi ye-Carbon isetyenziselwe ikakhulu ukuxhasa ipayework, imibhobho apho kudlula khona ulwelo kunye neglus. Kananjalo, iibhelts zensimbi yekhabhoni zilinganiswe kusetyenziswa ubunjineli obusebenza. Ibarbon iron U-bolt iyakuchazwa ngosayizi wombhobho owawuxhasa. I-U-bolt yensimbi yekharbon ikwasetyenziselwa ukubamba iintambo kunye.